Barta Biyaha oo ah wakiilka keliya Hagaag gudaha Poland ayaa lasiiyaa cabdi, ilo biyo cabitaanka guga iyo ilaha biyaha la cabo, ee loogu talagalay iskuulada iyo jaamacadaha, dhismayaasha xafiisyada, xarumaha dukaamaysiga, dhirta waxsoosaarka, naadiyada jimicsiga, xarumaha isboortiga, garoomada diyaaradaha, xarumaha, xarumaha caafimaadka, hoolalka madadaalada, tiyaatarada, shineemooyinka, xafiisyada gobolka, jardiinooyinka, garoonada ciyaarta, balanqaadyada, iwm.
Cabitaanka laba-ujeedka ah - Habka LZS8WSS2K
Qalab cagaaran - Muujiyaa tirada dhalooyinka caagga ah ee la kaydiyey.
Kormeeraha shaashadda Sawirka (moodooyinka leh shaandhada kaliya) - LED-yada cagaaran, jaalle, iyo casaanka ayaa tilmaamaya xaalada shaandhada.
Laminar durdur - Biyo buuxinta nasasho - waxay hubisaa socodka qulqulaya iyo kala-yareeyaha ugu yar
Tooska dabacsan - Flexi-Guard wuxuu ka ilaaliyaa dhaawacyada isticmaalaha. Waxay leedahay daahan ka ilaaliya koritaanka noolaha.
Firfircoonaanta dareemayaasha elektaroniga ah - Xiriir la'aan iyo hawlgal nadaafadeed oo si otomaatig ah u demiya ka dib 20 ilbiriqsi oo aan firfircooneyn.
Markii loo adeegsado machadyada iskuulka, waxaa lagu qalabeyn karaa mid khaas ah, heer sare ah, dabacsan oo Easy-Flex tufaax ah oo ka ilaaliya carruurta dhaawacyada. Mashiinka loogu talagalay buuxinta dhalooyinka waxaa si toos ah u kiciya aaladda dareeraha.
Khamri cabe - moodel EZS8S
Markii loo adeegsado machadyada iskuulka, waxaa lagu qalabeyn karaa mid khaas ah, heer sare ah, dabacsan oo Easy-Flex tufaax ah oo ka ilaaliya carruurta dhaawacyada.
Khamri cabe - dhigay LZSTL8WSS2K
Cabitaan - moodooyinka u adkaysta waxyeellada
Cabitaanka dibedda - wadarta guud ee dabiiciga ah